IZIPHO EZINGAMA-60 EZIZODWA ZOMAMA ABANAYO YONKE INTO 2021 - UBOMI
Izipho ezi-60 ezizodwa zeholide zoMama onazo zonke izinto
Akukaze kube kudala ukuqala ukukhangela isipho esifanelekileyo kuMama , ingakumbi luhlobo lwenenekazi esele linalo yonke into . Nangona abanye oomama banokugungxula ngaphezulu kwekomityi yekofu enamaqhinga okanye i-lavender-enevumba elimnandi into yokuthambisa umzimba , Umama wakho ukubonile konke, kwaye ukukhetha isipho sakhe seholide kufuna ingcinga ethe kratya. Akukho ngxaki!
Inkqubo ye- izipho ezilungileyo kuMama zezona ziya kumenza azive ebonwa kwaye eqondwa. Ukuze uyenze kakuhle, yenza i-recon encinci kwaye uzame ukumisela ukuba yintoni enokwenza ukuba ubomi bakhe bube ngcono okanye bube mnandi ngakumbi. Nokuba awudingi kulahla itoni yemali- izipho ezilula njenge izihlangu ukuba uyakuthanda ukuhamba, ijenali yokumnceda umonakalisi, okanye iphazili onokuyenza kunye ingambonisa ukuba umkhathalele kangakanani. Ukwenza uyilo kwenza wonke umahluko.
Ukucinga ngaphandle kwebhokisi kwenzeka ukuba sikhetheke, ngoko ke nokuba uMama akakhange alahle naliphi na icebo mva nje, usenokuthatha into eyahlukileyo kwaye uqinisekiswe ukuyikholisa. Iimbono ezingaphambili zipakishwe ziimveliso ezithandwa lihlelo, izinto ezithengisa kakhulu ezivela kwiimveliso ezipholileyo, kunye nezinto ongazi ukuba zikhona. (Ikhonkco yemaski enobuhlalu, ingqayi yekofu, okanye igin emfusa eqaqambileyo, nabani na?)
Kwaye kungcono, konke kuqala nge- $ 7 nje, oko kuthetha iKrisimesi egqibeleleyo, inkolo yalaJuda ,, okanye esinye isipho seholide sikanyoko, unkosikazi, udade, okanye intombi yakho akufuneki ibize ingalo nomlenze. (Owu, kwaye ungalibali umakhulu ngelixa ulapho!)
Isenokungabi lusuku lokuzalwa kwakhe, kodwa uyakuxabisa nangokukhulisa iintyatyambo ezibonisa inyanga yakhe yokuzalwa. Uyakukunceda ukuba iintyatyambo zakhe zikhule kwaye zikhule, kanye njengoko enzile nawe.
2Oomama ekuHambeniIbhegi ethambileyo yesikhumba IAmazon amazon.com$ 14.49 THENGA NGOKU
Yonke into-ukusuka kwi-iPad yakhe ukuya kwifowuni ukuya kwizitshixo zakhe-inekhaya kule ngxowa ityibilikayo, itosseled tote, enkosi ngaphakathi kwayo ebanzi kunye nepokotho esecaleni. Kwaye, iza ngemibala emininzi ukuhambelana nayo nayiphi na imeko kamama.
3Kwamakhaya asekhayaUmzobo weNdlu yesiqhelo Etsy etsy.com$ 40.49 THENGA NGOKU
Umama ugalela intliziyo yakhe ekwenzeni indlu yakhe ibe likhaya, ke iyalela umzobo we-watercolor wesiseko sekhaya likaMama kunye nolungelelwaniso lwayo emazantsi. Kuya kumkhumbuza onke amaxesha amnandi, nokuba uyahamba.
4Oomama abaxakekileyoUkubuyisela umva kunye neNeck Massager IAmazon amazon.com$ 49.95 THENGA NGOKU
Uxinzelelo yinto eqhelekileyo Isizathu seentlungu zangasemva , kwaye ukuba uMama uthanda ukuba nezinto ezininzi, lixesha lokuthanjiswa. Esi sixhobo silingisa i-shiatsu massage, singena nzulu kwiimisipha ukunciphisa uxinzelelo kunye noxinzelelo.
5AbafotiUmshicileli weFowuni ye-Instax Mini IAmazon amazon.com$ 156.99 THENGA NGOKU
Umshicileli omncinci uyathandwa kwindalo iphela ngenxa yokukwazi kwayo ukuguqula imifanekiso ye-smartphone ibe yindlela yesitayile sePolaroid. Kwimizuzwana nje engama-90, angatshintsha iifoto zakhe zedijithali azithandayo zibe bubugcisa obuphathekayo — njengeentsuku zakhe zokuzukiswa.
6Ngomama abanesidimaIkhandlela lomntwana olithandayo Etsy etsy.com$ 16.00 THENGA NGOKU
Hayi, asikusoli ngokukholelwa ukuba ungumntwana othandwayo nguMama. Efumaneka ngevumba elifana ne-chardonnay, usuku lokuhlamba impahla, kunye neti yelavenda, eli khandlela liya kumenza ahleke-sesiphi isipho esingcono esinaso?
7KumaMama aSentimentalUkubhalwa ngesandla kweCuff Bracelet etsy.com$ 71.00 THENGA NGOKU
Esi sacholo, esiguqula ukubhala kube yinto yobugcisa enxitywayo, sisipho esenzelwe umntu ngokwenene. Khetha isinyithi, nikezela ngefoto yento ongathanda ukuyithetha, kwaye uzilungiselele i-ol enkulu.
8KwabathengisiImizuzu iMimosa Sugar Cube Trio Iimpahla ezingaqhelekanga uncommongoods.com$ 30.00 THENGA NGOKU
Ukuba uMama wonwabele izinto ezintle ebomini — iicocktails, ubukhulu becala — uyazidinga eziityhubhu zeswekile, eziguqula kwangoko ii-champagne zibe ziimimosa kunye ne-bellinis.
9KuMama ngamnyeInto Endiyithandayo Ngomama Incwadi IAmazon amazon.com$ 8.00 THENGA NGOKU
Ngaba le ncwadi iyitshizi encinci? Ngokuqinisekileyo. Kodwa yiloo nto-gcwalisa le ncwadi ngeemvakalelo zakho ezinyanisekileyo malunga nendlela omthanda ngayo umama wakho kwaye uqinisekile ukufumana indawo ekhethekileyo eshelufini lakhe kwaye entliziyweni yakhe.
10Koomama ngaphandle kwendawo yokubasa umliloIndawo yomlilo ephathekayo IHuckberry huckberry.com$ 95.00 THENGA NGOKU
Ulibale imingxuma yomlilo-Umama ekugqibeleni unendawo yokupheka ekhayeni lakhe kunye nale ndawo yomlilo engenazo. Nokuba uzenzela eyakhe immores okanye ukongeza ubuntu kwigumbi lokuhlala, uya kufuna ukusebenzisa esi sipho sinye-somusa yonke imihla.
Shumi elinanyeUkuzinikezelaIsinxibo seParachute Cloud Cotton Iparashute yivum.com$ 99,00 THENGA NGOKU
Eli gumbi lokuhlambela likumgangatho wehotele linamakhulu ophononongo oluchanekileyo malunga nendlela entle ngayo. Zonke iinketho ezisixhenxe zemibala zijongeka ngathi zintsha ukusuka ekubalekeni kweenkwenkwezi ezintlanu-kwaye baziva bonwabile, nabo.
12IimbalekiI-Allbirds Dashers yoMthi zintng.com$ 125.00 THENGA NGOKU
Umama unokuba ngumnini we-OG Zonke iintaka , kodwa ngaba unodade wabo omtsha, kwezemidlalo? Sithathe ukuba sijikeleziswe kwaye ngokwenene zifana ncam-kwaye zenziwe ngezinto ezinobuhlobo. Umama uza kuba psyched.
13Abapheki basekhayaIBhodi yokuCoca iRipe Etsy etsy.com$ 69.00 THENGA NGOKU
Oomama bayo yonke imigca baya kuyithanda le-one-of-a-kind-cutting-board ebonisa iresiphi yakhe ebhalwe ngesandla ebhalwe ngesandla nge-laser. Uya kusebenzisa i-heirloom yakhe entsha kraca kwiminyaka ezayo.
14KwiiQueens HydrationIibhotile zamanzi ezikhuthazayo IAmazon amazon.com$ 14.99 ngexabiso THENGA NGOKU
Ezi bhotile zamanzi zidume nge-Insta zikhuthaza abasebenzisi ukuba basele igaloni yamanzi imini yonke. Ukuba uMama ungumtsalane omkhulu we-hydration, uya kuthanda ixesha lebhotile, iinotshi zokukhuthaza.
Shumi elinantlanuUkulala okuKhanyayoImask yokulala yokulala IAmazon amazon.com$ 29.99 THENGA NGOKU
Le maski yokulala ixabisa iirandi ezongezelelweyo, kuba iyahlengahlengiswa ngokupheleleyo kwaye inezinto ezinobunkunkqele obunzulu kakhulu obuvala konke ukukhanya. Ukuba uhlala echwechwa phezulu kwigumbi lokulala emva kwemini, ufuna enye yezi zinto.
16Iingcali zezeMpiloUthintelo lweMagazini Uthintelo ukuva.com$ 24.00 THENGA NGOKU
Iplagi encinci engenazintloni: Phatha uMama kweyona ingcebiso yezempilo, ukusebenza ekhaya, iingcebiso ngesondlo, iiresiphi ezinempilo, nokunye okunokubhaliselwa Uthintelo . (Kwaye ukuba sele enayo, mnike ukufikelela kuyo Uthintelo INkulumbuso endaweni yoko.)
17KwiimfashiniIHarati yoBude obuPheleleyo IAmazon amazon.com$ 179,99 THENGA NGOKU
Esi sipili sinesitayile, sinengqombela sinokuhlala eludongeni, sinyuswe eludongeni, okanye sime sodwa — kwaye sibonisa nendawo yokunxiba ngasemva. Ngokuqinisekileyo uMama akanazo ezi zinto, kodwa ngokuqinisekileyo uyayifuna.
18Kwabamama banamhlanjeAmacici oonxantathu besikhumba Etsy etsy.com$ 27.56 THENGA NGOKU
Yenziwe ngesikhumba esenziwe ngokutsha, la macici anamhlanje ajikeleza ngokukodwa kwizinto zokuhombisa zemihla ngemihla ngelixa engathathi cala ngokwaneleyo ukuba angahamba nayo yonke into. Bayangena eminye imibala , kananjalo!
19Omama abaBalaseleyoI-Monogram ye-iPhone ye-Personal Case Etsy etsy.com$ 24.99 THENGA NGOKU
Ukuba uMama luhlobo oluthandayo ukufikelela (kwaye ohlala efowunini yakhe), ke yena iimfuno eli tyala lefowuni elenzelwe wena. Ngeemodeli ezininzi zefowuni onokukhetha kuzo, konke okufuneka ukwenze kukuthatha ukhetho olufanelekileyo kwaye ulinde ukuba abulele.
Amashumi amabiniEyomama abakhuthazayoUkuphila iitawuli zeKhitshi yoBomi IAmazon amazon.com$ 14.99 ngexabiso THENGA NGOKU
Mnike ezi thawuli zeti njenge sisikhumbuzo esimnandi semantra eqinisekisa ubomi. Xa ehamba ngasekhitshini, uya kuncuma-kwaye athi ukuthula enkosi kuwe entlokweni yakhe.
amashumi amabini ananyeKoomama abasebenzayoImibala ebunjiweyo ePhakamileyo IAmazon amazon.com$ 25.00 THENGA NGOKU
Ungalivumeli igama lophawu olungacwangciswanga ukuba likukhohlise: Ezi tights zezinye zezona zikala zibalaseleyo kwiAmazon. Kuba zifikeleleka kakhulu, qhubela phambili kwaye ufumane uMama uninzi lwemibala emininzi ekhoyo- kutheni ungaguquli ukujikeleza kwengubo yakhe esebenzayo?
22KwiGurus yezeMpiloIGolde Matcha Turmeric Latte Blend Madewell mamewell.com$ 29.00 THENGA NGOKU
Le powder superfood eguquguqukayo inikwe amandla yikhokhonathi, i-matcha, ijinja, iturmeric, kunye nekhadiyamam, iyenza ilungele i-latte yakusasa kaMama okanye i-smoothie. Ewe!
2. 3Kubalandeli beHyggeIsotoner Slip-KwiClog Slippers IAmazon amazon.com$ 24.00 THENGA NGOKU
Ezi ziqhoboshi zinomtsalane weNordic kubo, zibenza babe zezabo zoomama abazixakekise nge-IKEA kunye nantoni na emnandi. Imemori yegwebu ibenza bazive belungile njengoko bajongeka.
24Abasebenzi abaBalulekileyoImisila yenkomo eyenzelwe wena Etsy etsy.com$ 14.00 THENGA NGOKU
Nokuba ungutitshala, ugqirha, okanye umntu othanda ukugqama kwivenkile yokutya, imaski yenkomo eyenzelwe wena yinto nje yesitayile sefashoni ebesikade siyifuna.
25KwiiFloristRifle Paper Co. Banokubulawa Masks ubuso IRifle Iphepha Co. wqwcngcoo.com$ 15.00 THENGA NGOKU
Umama unokugonywa, kodwa kusafuneka nxiba imaski iindawo ezininzi. Uyakonwabela ukunxiba ezi zinto zivela kumama onobuhlobo uRifle Paper Co., ekufuneka ilingane ngqo nengubo yakhe ethandekayo.
26Oomama abanezithupha eziluhlazaUkulima igadi kunye nezixhobo IAmazon amazon.com $ 55.20$ 42.00 (24% icinyiwe) THENGA NGOKU
Imnandi njengegadi yakhe, esi seti sesixhobo segadi sinepateni entle yejometri eyibeka yodwa. Iza iphelele ngezixhobo zesinyithi ezingenazintsimbi, kunye negumbi lezo sele zinazo.
27KwiiMaximalistsImisebenzi yezandla yasekhaya ekhangelwe isakhelo somfanekiso IAmazon amazon.com$ 16.99 THENGA NGOKU
Ukuba uMama akoyiki ukwenza ukhetho olungqongqo okanye ezimbini kwinto yakhe yokuhombisa ekhaya, mxhome kule freyimu yokutshekisha ngokuchanekileyo, enokusetyenziselwa ukubonisa iifoto ezithandekayo, ubugcisa, kunye neentyatyambo ezicinezelweyo.
28AbahombisiImifanekiso yoSapho yoSapho etsy.com$ 100.50 THENGA NGOKU
Ngaba iseshoni yakho yemizobo yosapho ayizange ihambe njengoko bekucwangcisiwe? Endaweni yokumisa ikhamera, iyalela uMama umzobo wosapho onomfanekiso oya kuthi uzingce ngendawo yakhe ezindongeni.
29KwiiMixologistsUKumkanikazi ngo-1908 Gin Ukohlwaya dizly.com$ 39.99 THENGA NGOKU
Ngephalethi eqaqambileyo, enesitrasi, le gin ekhethekileyo ngokukhethekileyo iya kunyathela i-G & Ts kaMama phezulu. Kwaye, jonga nje loo mbala!
30Omama AbakhanyayoUmqala weCharm Celestial Charm Iimpahla ezingaqhelekanga uncommongoods.com$ 44.00 THENGA NGOKU
Kungakhathaliseki isitayela sakhe, uya kugubungela le khonkco. Ukuba uyincinci, iya kubonakala ilungile nge-crisp tee okanye ihempe ye-denim; ukuba uthanda i-oomph ethe kratya, iya kujongeka ilayishwe kakuhle nezinye iintsimbi zomqala.
31Oomama abaBalaAbahlobo bamakhowa iBath Mat Abaphuma ezidolophini dengcangcang.com$ 39.00 THENGA NGOKU
Lo mat ukonwabela ukongeza idosi eyamkelekileyo yombala nakweyona ndawo yokuhlambela kakhulu. Nyaniseka-ngaba bakho nabaphi na oomama abangathandiyo ukunyathela kwinto ehlekisayo emva kokuhlamba kwabo kusasa?
32AbaFumanisiUMark kunye noGraham Palm Igqabi eliDibeneyo UMarko kunye noGraham markandgraham.com$ 49.00 THENGA NGOKU
Nangona ihlobo elizayo liziva lisekude, uMama unokusebenzisa ibhegi elungiselelwe iholide. Yenzele umsebenzi ngale clutch ilukiweyo elungileyo, eboshwe ngelaphu elulwandle.
33Ulibale oomamaIzandla eziPhathekayo zeCatchall Etsy etsy.com$ 16.00 THENGA NGOKU
Isiphatho esihle esenziwe ngesandla esitshatileyo sinokujongeka sihle kakhulu kwisinxibo sakhe. Olu khetho luthandekayo lubambe amakhonkco akhe axabisekileyo kunye nemixokelelwane kwenye indawo ngochukumiso lomntu.
3. 4Eyamama boozyInBooze Sangria Infusion Kit Etsy etsy.com$ 18.00 THENGA NGOKU
Zonke izinto eziyimfuneko kumbulali we-sangria, kubandakanya iziqhamo ezomileyo kunye neziqholo, zikule kit yokufakwa. Bhangqa ipakethi kunye nebhotile okanye ezimbini azithandayo isiselo somdiliya esibomvu ukumnika konke ihlobo liyangcangcazela.
35Oomama abaCwangcisiweyoIsiCwangciso seMveliso IAmazon amazon.com$ 29.99 THENGA NGOKU
Nika incwadana yamama yakho endala uhlaziyo kunye nesi sicwangciso siphezulu, esinokumgcina elungelelanisiwe, ngaphezulu kweenjongo zakhe zeveki, kwaye ekhuthazekile ngetoni yeengcaphuno ezikhuthazayo.
36KwiiFoodiesMomofuku Half Bo Ssäm Isidlo sangokuhlwa IGoldbelly imvelaphi.com$ 169.00 THENGA NGOKU
Unokwazi ukupheka uMama isidlo esikhethekileyo, kodwa unako ukumnika isipho. Le pakethi evela kwi-NYC isisiseko seMomofuku iza negxalaba lehagu elitshayiweyo kunye nekhiti yerayisi eyosiweyo-ngubani ongayifuniyo loo nto?
37Abasebenzi baseKhayaSihlalo seBhola yozinzo amazon.com$ 59.99 THENGA NGOKU
Ngale bhola yozinzo iphezulu, uMama unokuhlala ekhuthele nokuba usebenza ekhaya. Isigqubuthelo sayo esisuswayo sinokukhululwa kwaye siphoswe kwindawo yokuhlamba, kwaye iza nempompo yayo.
38Oomama abaSitayileIzibuko zelanga zikaWarby Parker Taye UWarby Parker ewdc.com$ 95.00 THENGA NGOKU
Ezi thunzi zipholileyo ezivela eWarby Parker zicocekile kwaye zinobuqili, kwaye zijongeka zintle kuyo nayiphi na imilo yobuso. Bakwindlela entle ngakumbi kuneevenkile zikaMama ezivenkileni, ke uya kuyithanda indlela abaziva ngayo.
39Koomama abaQhelekileyoUxolelo Ukudibanisa iti yeHerbal Etsy etsy.com$ 16.00 THENGA NGOKU
Le iti ithoba amagqabi ekhululekile ilungele ukunceda uMama ukuba ahlale egxile kwezona ntsuku zixakekileyo. Kwaye unokufefa ngamanzi okuhlamba xa efuna uncedo olongezelelekileyo lokuphumla.
40Imimoya yasimahlaIkhandlela elijijekileyo Etsy etsy.com$ 12.00 THENGA NGOKU
Amakhandlela aphambukayo, agqwethekileyo anomzuzu omkhulu, kwaye sinoluvo lokuba umama wakho angangumlandeli. Ngeetoni zeemilo kunye nemibala onokukhetha kuyo, uya kufumana iintlobo ezahlukeneyo zokumnika isipho.
41YeYogisAkukho Siliphu seYoga Socks, 4-Pack IAmazon amazon.com$ 13.99 ngexabiso THENGA NGOKU
Ezi kawusi zitshibilikayo ezichasayo zigcina iinyawo zakhe zityalwe zaqina emethini, zimnceda ukuba ahlale ekhuselekile, esebenzayo kwaye afudumele ngexesha elinye. (Ezi iimethi zeyoga ukubheja okukhuselekileyo, nako!)
42Koomama abaCaffeineNgeendiza zekofu Iphakheji yasimahla svuyangco.com$ 6.50 THENGA NGOKU
Ukuba ungumntu othanda ikofu okanye iti, mnike le nto umququ onokuphinda usetyenziswe , Eyilelwe ngokukodwa iziselo ezishushu. Akushushu xa uyibamba kwaye ingena ngaphakathi kwiziciko zekofu esemgangathweni- andisathethi ke ngokukhusela amazinyo akhe kumabala.
43Yee Couch IitapileIkhava yomqamelo wokuphosa ngaphakathi IAmazon amazon.com $ 9.99 ngexabiso$ 8.99 (10% icinyiwe) THENGA NGOKU
Ukuba uhlala etshintsha ukuhonjiswa kwendlu, mnike into enye angayi kufuna ukuthatha umhlala phantsi. Lo mqamelo usisikhumbuzo sendlela athandwa ngayo, nokuba nonke nikude.
44Ye Makeup MavensUMario Badescu Ukutshiza i-Trio yobuso IAmazon amazon.com$ 21.00 THENGA NGOKU
Iseti yokutshiza inezinto ezintathu ezihlaziya ngokuhlaziya: i-rosewater, ikhukhamba kunye neti eluhlaza, kunye ne-chamomile kunye ne-lavender. Baya kuphelisa ukunxanwa kwesikhumba sakhe ngaphandle kokuphazamisa ukwakheka kwakhe okanye ukuvala ii-pores zakhe.
IsineKwiihippieIVase yoxolo nguJustina Blakeney Umjelo mlung.com$ 68.00 THENGA NGOKU
Le vaseji ikude ilungele isiQinisekiso soBomi siLungile-silula, sinomtsalane kwaye sinethemba. Yidibanise neentyatyambo ezimbalwa zesipho angasoze afune ukusibeka.
46KwiiNesters ezingenantoIsakhelo seFoto yeDijithali yeAluratek IAluratek amazon.com $ 39.99$ 32.81 (18% icinyiwe) THENGA NGOKU
Nje ukuba uMama abe yindlala engenanto, uya kufuna ukuziva enxulumene ngakumbi nosapho kunanini na ngaphambili. Ukugcina zonke izinto azithandayo endaweni enye, olu khetho lunesikrini se-intshi ezi-7 intshi kunye nesakhelo somthi.
47Oomama abasebenza ngaphezuluIimaski zobuso besikhumba, i-24-Pack IAmazon amazon.com$ 14.99 ngexabiso THENGA NGOKU
Ii-Spas ziyaphupha, kodwa oomama baxakekile. Iimaski zephepha sisisombululo. Le ivela eSephora, inetayi eluhlaza evuselelayo, ikhupha ulusu kwimizuzu nje embalwa. Amanqaku ebhonasi ukuba nobabini ninxibe enye kwaye nithatha iiselfie kunye!
48Oomama aba-plug-inIkhebula lobusuku boMdibaniselwano Umbutho Womthonyama amazon.com$ 39.99 THENGA NGOKU
Akukho nto ikruqulayo njengokuvuka ebhedini ukuze ubize ifowuni yakho. Gcina uMama usizi ngentambo yokutshaja eyongezelelekileyo eyomeleleyo eyimimangaliso yeenyawo ezili-10 ubude.
49Kumama odidayoUNathalie Lété I-Puzzle yeMivundla I-Anthropology kwanele.com$ 15.96 THENGA NGOKU
Umama akanakuze abe neepuzzle ezininzi, ngakumbi ukuba zikhethekile njengale. Ishicilelwe ngombono we-psychedelic yemivundla, amakhowa, kunye nemifuno, ayifani nayo nayiphi na into ayenzileyo ngaphambili.
Amashumi amahlanuOomama abaNikwa iLotionIinyosi zikaBurt zeClassics zeSipho IAmazon amazon.com$ 24.07 THENGA NGOKU
Le khithi isondlayo evela kwiinyosi zikaBurt ine-cuticle cream, intambiso yesandla, i-lip balm, i-cream yokulungisa izandla, i-cream cream, kunye neoyile yokuphilisa-yonke into ayifunayo ukugcina ulusu lwakhe lonwabile kulo nyaka.
51Kwabahleli bezoBuhleIsiliphu sePilowcase imvu.com$ 89.00 THENGA NGOKU
Ngelixa i-pillowcase yesilika inesiphumo esicacileyo sokuziva nje ubutofotofo (njengokuhlala kwihotele ephezulu) inezibonelelo zokwenyani, ukuhambisa iinwele zikaMama kunye nokugcina ulusu lonwabile.
52Eyomama beWayiniVinglace igqunyiwe Wine Glass IAmazon amazon.com$ 34.95 THENGA NGOKU
Ukufezekisa iipikniksi, ukuhamba ngesikhephe, okanye ukwenza inkampu, le ndawo ikhutshelweyo ngoyena mntu uphambili koomama abathanda iwayini. Igcina ii-ounces ezili-10 zamanzi kwaye ihlala ixesha elide ngakumbi kunewayini yendabuko.
53Kumama oManziI-Cream SPF engabonakaliyo ye-Emollient Indawo yokutyela elungec.com$ 27.00 THENGA NGOKU
Le khrimu yesandla ekhusela ilanga iya kugcina izandla zakhe zithambile-ubusika bonke-kwaye kungcono, ziya kugcina ulusu lukhangeleke kwaye luzive lincinci, kananjalo.
54Omama Abathanda iTiI-Bella Electric Tea Kettle Intle amazon.com$ 39.99 THENGA NGOKU
Ukuba uMama wakho uyamthanda iti yangokuhlwa , Uyakuyithanda le ketile yombane. Iya kubilisa amanzi ngemizuzwana, oko kuthetha ukuba unokufumana indlela yakhe ye-chamomile ngokukhawuleza kuneketile yakhe yesitovu.
55Yolusu lwe-SkincareI-Olay Regenerist encinci yokuCoca ikrimu Walmart amazon.com$ 18.49 THENGA NGOKU
Ukhe umvile ukuba ukhululekile malunga nemibimbi, ngoko mphathe kule cream yobunewunewu, equlathe iipeptides ukunciphisa imibimbi, hyaluronic acid ukuhambisa imigca yesohlwayo, kunye nevithamini B3 ukubonelela nge-hydration eyongezelelweyo.
56Oomama boncwadiUmthombo wokuzijonga IAmazon amazon.com $ 28.95$ 15.29 (47% icinyiwe) THENGA NGOKU
UMorrison wayenamandla ombhali, ocinga kunye nonina. Le ngqokelela ikhusela ezona ntetho zakhe zibalaseleyo, izincoko kunye neengcinga, uhlobo lwesipho umama wakho anokujikela kuso rhoqo.
57Oomama abaNqabileyoInqwelo yeOdessa Bar IAmazon amazon.com$ 135.31 THENGA NGOKU
Inqwelomoya olungileyo ubopha naliphi na igumbi ngokudibeneyo, ngakumbi ngokuzonwabisa kufutshane. Olu khetho lukhangeleka lubiza kakhulu kunendlela ekuyiyo, kwaye i-charm yayo yakudala yaseHollywood igcwalisa izakhono zikaMama zokuxuba ngokugqibeleleyo.
58Kumama weKofuIikawusi ezithandekayo zekofu ICavertin amazon.com$ 8.90 THENGA NGOKU
Ukubiza zonke izihlobo zabathandi bekofu! Ezi kawusi ziya kwenza isipho esihle kumatshini wakho we-caffeine-ulungele ukulandela ukuzisa uMama indebe yejoe.
59YeSnackersI-Whirley-Pop Popcorn Popper IAmazon amazon.com THENGA NGOKU
Ngubani ongayithandiyo isitya esitsha esenziwe ngopopu? Yaphula umkhwa kamama we-microwave popcorn ngale stovetop popper, ejika ixesha lokutya ibe sisiqhelo esimnandi esimangalisayo. Kwaye unokulawula ngokuthe ngqo ukuba zeziphi izongezo azongeza kwibhetshi nganye!
60IiJetsettersIsimbozo sepasipoti yesikhumba IAmazon amazon.com$ 12.99 THENGA NGOKU
Uyazi uMama sele ephupha ngeholide yakhe elandelayo. Kodwa inye into angakhange ayithathele ingqalelo? Umnini wepasipoti wakhe ogugileyo. Mthumele ngaphandle ngesitayile ngale nombolo yesikhumba intle.
izihlangu zomsebenzi ezilungileyo zokuma yonke imini
oko kuthethwa ngama-555
ziya kufumaneka nini ii-clorox wipes
izihlangu ezizezona zinxitywa ngabongikazi